Amaqhosha asixhenxe kuThengiso lweShishini elincinci kunye nokuThengisa | Martech Zone
Ngelixa sincedisa amashishini amakhulu ngokuthengisa kunye nemizamo yokuthengisa, sili shishini elincinci ngokwethu. Oko kuthetha ukuba sinezixhobo ezinqongopheleyo kwaye njengoko abathengi beshiya, kubalulekile ukuba sibe nabanye abathengi abathatha indawo yabo. Oku kusenza sikwazi ukulawula ukuhamba kwethu kwemali kunye nokugcina izibane zikhanya! Yimeko enzima, nangona kunjalo. Sihlala sinenyanga okanye ezimbini kuphela ukulungiselela ukuhamba komthengi omnye kunye nokukhwela kwenye elandelayo. Amashishini amakhulu ane-capital yokukhula kwaye eyakhelwe yona, amashishini amancinci ayenjalo.
Ke, kukho isiseko somsebenzi ekufuneka senziwe ngamashishini amancinci onke ukuba siqinisekise ukuba siyasebenza ukugcina isikhokelo sihamba sijika sisiba ngabathengi! I-Infusionsoft ibeke ndawonye le infographic eqinileyo kuyo I-7 Enkulu: Yiyiphi into ekufuneka ayenze onke amashishini amancinci malunga nokuThengisa kunye nokuThengisa. Izitshixo ezisixhenxe kwintengiso yamashishini amancinci kunye nentengiso zezi:
Ukutsala iTrafikhi kwi-intanethi usebenzisa uphando kunye nemidiya yoluntu.
Thatha iiNkokeli ngorhwebo ngolwazi lokunxibelelana nesibonelelo.
Ukukhulisa amathemba ngokunxibelelana ngokobuqu nangamathuba athile.
Guqula ukuthengisa Ngokuguqula izikhangeli zibe ngabathengi ngeenkqubo zokuthengisa ezilungiselelwe.
Hambisa kwaye wanelise Ukuguqula abathengi abatsha babe ngabathengi abathembekileyo.
Upsell Abathengi ngokuthumela iminikelo yokulandelela kwiimveliso ezincedisayo kunye neenkonzo.
Fumana iiReferensi ngokubuza abathengi abathembekileyo ukuba basasaze igama malunga nawe kwaye ubavuza.
tags: Guqula ukuthengisaukwaneliseka kwabathengiukuhambisa iimvelisobamba phambiliukukhulisa ithembaukubhekisaumvuzoukuthengisa kunye nentengisoShishinismbzendlelaabathengi abathengisayo
Isiphelo sendlela: Yakha, Vumelanisa kunye nokuKhangela ii-URL zakho zePhulo likaGoogle